Healthy Life – Page7– Healthy Life Journal
ဗီယက်နမ်အလှမယ် ငုယင်ထရန်ဟုရန်မေ ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ အမူအကျင့်များ
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဗီယက်နမ်အလှမယ် ငုယင်ထရန်ဟုရန်မေဟာ သရုပ်ဆောင် နေတိုးနဲ့တွဲပြီး ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ လာရောက်ချိန်ကစပြီး ပြန်ရောက်သွားတဲ့အထိ သူ့အသားအရေ ကြည်လင်သန့်စင်မှု၊ လှပကြည့်ကောင်းမှုနဲ့ ကျော့ရှင်းမှုတို့အတွက် လူတွေပါးစပ်ဖျား ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။...
ကျန်းမာသွက်လက်ဖို့ ကခုန်ကြစို့ . . .
၊ လရိပ်မေ ကခုန်တာက အားလပ်ချိန်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပါ။ တီဗီကြည့်ရင်း ကခုန်တာ၊ ရေချိုးရင်း ကခုန်တာ စသဖြင့် အိမ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဆောင်နိုင်သလို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကာရာအိုကေ အတူဆိုရင်းလည်း ကခုန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကခုန်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု...
ဆောင်းတွင်းကာလ ဖျားနာခြင်း ကင်းအောင်
မိမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) လက်ဆေးပါ၊ လက်တွေကို သေချာဆေး ကြောသန့်စင်ပါ။ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်အနားယူပါ။ စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းတာ၊ အလွန်အမင်း နုံးချည့် ညောင်းညာတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိခိုက်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာစတာတွေရှိလာရင်...
သွန်းဆက်၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ
တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ သွန်းဆက်တို့က ရှုတင်သွားတဲ့အခါနဲ့အပြင် တခြားပွဲတွေသွားတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်ကို အမြဲတမ်းလိမ်းရတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် မိတ်ကပ်ကို သေချာဖျက် တယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့ Skin Care ကို သုံးဖြစ်ပါတယ်၊ လိုးရှင်းလည်း အမြဲတမ်းလိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကုထုံး လုပ်ဖြစ် ....
အေးချမ်းမိုး ၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ
တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ . . . ညီမတို့က နေ့စဉ်အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဆက်နွှယ်နေရတယ်ဆိုတော့ မိတ်ကပ်က အမြဲလိမ်းနေရတယ်။ အဲဒီတော့ မျက်နှာပိုင်း ကို ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကို မိတ်ကပ်အမြဲ လိမ်းထားရတော့ အပြင်ကပြန်လာရင် မိတ်ကပ်ကိုသေချာဖျက်တယ်၊ ညပိုင်း အိပ်ခါနီးဆိုလည်း မျက်နှာသေချာသစ်ပြီး...
Miss Universe Myanmar မေဘရဏီသော် ၏ ကျန်းမာလှပလူမှုဘဝ
တစ်နေ့တာအသားရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ ညီမက အပြင်သွားရင် အသားအရေကို နေလောင်ဒဏ်မဖြစ်အောင် အင်္ကျီလက်ရှည်ဝတ်တယ်၊ နေကာခရင် လိမ်းတယ်၊ ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တာကတော့ လိုးရှင်းကို သေသေချာချာ လိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ ရာသီဥတုကြောင့် အသားအရေပျက်စီးတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်း သေချာဂရုစိုက်ပါတယ်။ မေဘရဏီသော် လုပ်နေကျ သဘာဝကုထုံး ညီမက အသားအရေကို သဘာဝကုထုံးနဲ့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊...
ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်ထိတွေ့ဖြစ်နေသော အညစ်ပတ်ဆုံး အသုံးအဆောင် ၁၅ မျိုး
လရိပ်မေ ညစ်ပတ်ပေမယ့် ကျွန်မတို့တစ်တွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထိတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ထိတွေ့တဲ့အခါ ပိုးမကူးစက်စေဖို့ အသုံးအဆောင်တွေကို နေ့တိုင်း သန့်စင်ပေးသင့်သလို အဲဒါတွေ ထိတွေ့ပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း လက်ကို သေချာ ဆေးကြောပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (၁) တံခါးလက်ကိုင်...
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ငွေကြယ်စင်ယံ ကားပါကင်ထိုးတဲ့ နေရာကစပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို စတင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အချိန်သီးသန့်ပေးစရာ မလိုဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခြေသလုံးမြှင့်တင်ခြင်း မိတ္တူကူးစက်၊ ပရင်တာ စတာတွေမှာ စာရွက်ထွက်လာတာကို...
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ ပိုပို
တစ်နေ့တာ အသားရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ ညတိုင်း အိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ Skin-Care ကို နေ့တိုင်းသုံးတယ်၊ ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီး များများစားတယ်၊ တစ်ခါတလေ အသားအရေအတွက် အထောက်အကူ အကျိုးရှိစေမယ့် အစားအသောက် အသီးအနှံတွေ စားပါတယ်။ အသားအရေအတွက် နေ့တိုင်း ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တာကတော့...
မြန်မာလူမျိုးတို့ ရောဂါကင်းဝေးရေးအတွက် ဆားစားသုံးမှု လျှော့ချသင့်
ရေရှည်တွင် ဆားစားသုံးမှုများလွန်းလျှင် ကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း အစရှိ သည့်ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်တတ်သည့်အတွက် မြန်မာလူမျိုးတို့ ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန် ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်က ပြောကြားသည်။ “ ဆား ”စားသုံးမှု လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် –  ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ...